Nyi Mu Yar: January 2009
လက်လှမ်းမှီ သမျှ ကျန်းမာရေး အာမခံ (၃)
Safari Zoo Run 2009
30 Dread Diseases in Singapore
လက်လှမ်းမှီ သမျှ ကျန်းမာရေး အာမခံ (၂)
လက်လှမ်းမှီ သမျှ ကျန်းမာရေး အာမခံ (၁)
NYE with My acer
at Monday, January 19, 2009 Labels: MM , Singapore Posted by nyimuyar2comments
စင်ကာပူ မှာလည်း ကျန်းမာရေး အာမခံကို ၆ မျိုး အသေးစိတ်ထပ်မံပြီး ခွဲထားပါသေးတယ်။
၂) Medical Expense Insurance
၄) Critical Illness Insurance
၅) Disability Income Insurance
၆) Long-Term Care Insurance
အဲ့ဒီထဲမှာ အဓိက မရှိမဖြစ် ထားသင့်တာကတော့ နံပါတ် ၂ မယ်ဒီကယ် အိပ်စ်စပန့် အာမခံ (Medical Expense Insurance) ပါ. သူက အခု ပြောနေရေးနေတဲ့ ဆေးရုံတက်စားရိတ် အာမခံပါပဲ၊
နောက်တခါ စင်ကာပူ ဆေးရုံတွေက အဆောင် အခန်းတွေကို ဒီလို သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
A ward - တယောက်ခန်း
B1 ward - ၂ ယောက်ခန်း
B2 ward - ၄ ယောက်မှ ၆ ယောက်ခန်း
C ward - ဟောခန်း
ဆိုပြီး သတ်မှတ် ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
အချို့ပေါ်လစီ တွေက ကျသင့်သလောက် ပေးမယ်။ ဒါပေမယ့် တရက်ကို အများဆုံး ဘယ်လောက် အထိ ပဲ ပေးမယ် ဆိုတာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။ အဲလို ကန့်သတ်ထားရင် အဲ့ဒီတရက်စာပေးမယ့် ငွေကို မူတည်ပြီး သင့်တော်တဲ့ အခန်းမှာ တက်ရတာပါ။ ဆိုကြပါစို တရက်ကို ၁၅၀ ပဲပေးမယ့် ပေါ်လစီဆိုပါတော့ ဆေးရုံက အခန်းက ဘီ၂ (၄ယောက် - ၆ယောက်ခန်း) က တရက်ကို ၁၁၅ဒေါ်လာ ဆိုတော့ အဆင်ပြေတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ ဆေးရုံလည်း ရောက်ရော ဘီ၂က နေရာမရှိတော့ဘူး ဒါနဲ့ ဘီ၁(၂ယောက်ခန်း) တရက် ၁၈၀ တန်လောက် တက်လိုက်ရတယ်။ ဒါဆို အာမခံက ပေးတာ တရက် ၁၅၀ မလောက်ဘူး ပိုတဲ့ ၃၀ ကိုယ်စိုက်ပေါ့။ ဒါမျိုးအာမခံကတမျိုး။
နောက် အာမခံ တမျိုးကလည်း ကျသင့်သလောက် ပေးမယ် ဒါပေမယ့် ဘီ အခန်းတွေပဲ တက်လို ့ရမယ် လို့ ပြောထားရင်။ သူတို ့က ဘီအခန်းတွေ တက်ရင် အကုန်ကျသမျှပေးမယ်။ တကယ်လို့ကိုယ်က ဘီအခန်းတွေ မအားလို့အေအခန်းတွေ သွားတက်မယ်ဆို ပိုတဲ့ပိုက်ဆံ ကိုယ်စိုက်ပေါ့။
နောက်တမျိုးကလည်း ရှိသေးတယ်၊ ဒါကတော့ ကောင်းတဲ့ဘက် ကိုယ်ပြန်ရမယ့် ဘက်ပေါ့။ ဥပမာ ကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့ အာမခံက ဆေးရုံတက်ရင် အေ(တယောက်ခန်း) တွေ တက်လို ့ရတယ် ဆိုပါတော့။ ဆေးရုံလည်း ရောက်ရော အေအခန်းတွေ က မအားဘူး။ ကံမကောင်းစွာပဲ စီ(ဟောခန်း)တွေပဲရလို စီဆောင်မှာပဲ တက်လိုက်ရတယ်ဆိုရင်။ နောက်ဆုံးပိတ် ပိုက်ဆံ ပြန်တောင်းတဲ့အခါ တရက်ကို ဘယ်လောက် ပိုက်ဆံပြန်ပေးတာမျိုးပေါ့ (နစ်နာကြေးပေါ့ဗျာ) တကယ်ပိုက်ဆံပြန်ပေးမှာလား ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ပေးစရာရှိတဲ့ ပိုက်ဆံထဲက ခုနှိမ်ပေးမှာလားကတော့ အာမခံဝယ်ကတည်းက သေချာမေးကြည့်ရမှာပါ။
စင်ကာပူဆေးရုံတွေမှာ အစိုးရက ထိန်းကျောင်းထားတဲ့ (အစိုးရပိုင် ဆိုကြပါစို ့ရဲ့) ဆေးရုံ တွေနဲ့ ပုဂ္ဂလိက ပိုင်ဆေးရုံဆိုပြီး အဓိကအားဖြင့် ၂ ပိုင်းခွဲထားပါတယ်။ အစိုးရပိုင် ဆိုတာမျိုးက ထုံးစံအတိုင်း သက်သာတာပေါ့ဗျာ။
Public/Restructured General Hospitals
* Alexandra Hospital (a former British Army Hospital until 1970)
* Changi General Hospital
* Jurong General Hospital (planned)
* National University Hospital
* Khoo Teck Puat Hospital (under construction)
* Singapore General Hospital
* Tan Tock Seng Hospital
Public/Restructured Specialist Centres
* Communicable Disease Centre
* Kandang Kerbau Women's and Children's Hospital
* National Blood Centre
* National Dental Centre
* National Skin Centre
* National Cancer Centre
* National Heart Centre
* National Neuroscience Institute
* Singapore Gamma Knife Centre
* Singapore National Eye Centre
* Institute of Mental Health (originally known as the Woodbridge Hospital)
* Adam Road Hospital
* Camden Medical Centre
* East Shore Hospital and Medical Centre
* Gleneagles Hospital and Medical Centre
* HMI Balestier Hospital
* Johns Hopkins Singapore International Medical Centre
* Mount Alvernia Hospital and Medical Centre
* Mount Elizabeth Hospital
* Novena Medical Center
* Raffles Hospital
* Thomson Medical Centre
* Westpoint Hospital
့အသေးစိတ် သိလိုသူများ ဒီနေရာ မှာ ကြည့်ပါ။
အချို့အာမခံတွေမှာ ကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့ အဆင့်ပေါ်မူတည်ပြီး
အစိုးရ နဲ့ ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံတွေ ဘယ်မှာပဲ တက်တက် အကုန်ပေးမယ်
အစိုးရ ဆီမှာ အကုန်ပေးပြီး ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံမှာ တက်ရင် ၆၅ ရာနှုန်းပဲပေးမယ်
အစိုးရ ဆီမှာပဲ တက်ခွင့်ရှိမယ်
နောက်တခါ အစိုးရ ဆေးရုံမှာ တက်ရင်ေးမတာင်မှာ အေဆောင်အထိ တက်လို ့ရမယ်
ဘီဆောင်တွေ ပဲတက်လို ့ရမယ် စီဆောင် တွေပဲ တက်လို ့ရမယ် ဆိုတာမျိုး ကွဲပါသေးတယ်။
အမျိုးသမီး တွေ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့ အခါ ပုံမှန် သားဖွား ခြင်းကို မိန်းမ သဘာဝ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကုန်ကျစားရိတ် (မီးဖွားစားရိတ်) ကို အာမခံတော်တော်များများက မပေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အချို့အာမခံပေါ်လစီတွေမှာ ကျတော့ ရှုပ်ထွေးတဲ့ ကိုယ်ဝန်တည်မှု(စပျစ်ခိုင်ကိုယ်ဝန်) လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ရယ် ကုသစားရိတ် ဘယ်အတိုင်းအတာ အထိ ပေးပါ့မယ် ဆိုတာမျိုးပါပါတယ်။ ဈေးလည်း ပိုပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင် အာမခံ ပေါ်လစီ သပ်သပ်ရှိတာဆိုလို့AXA တခုပဲတွေ ့မိပါတယ်။ သူက အမိ ရော အဖပါ သူ ့ဆီမှာ အာမခံ ထားရမယ် ဒါဆို မိခင် ကိုယ်ဝန်ဆောင် ကုန်ကျစားရိတ်ကို သပ်သပ်ဝယ်လို ့ရပါတယ်။ တနှစ် ကို ၁၂၀၀ ပါ။ ဒါပေမယ့် ပထမ နှစ် သုံးလ အတွင်းကိုယ်ဝန်မရှိရဘူး ဆိုပါတယ်။ ဆိုတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် ၉ လကျော်မှ မွေးမှာ ဆိုတော့ သေချာပေါက် ၂ နှစ်စာဝယ်ရပါမယ် ၂၄၀၀ ပေါ့၊ ဒါပေမယ့် ကန် ့သတ်ချက်က ရိုးရိုး ပုံမှန် သဘဝအတိုင်း မွေးခြင်းကို ၅၀၀၀ အထိပဲ ကုန်ကျခံပေးမှာဖြစ်ပြီး ရှုပ်ထွေးပွေလီတဲ့ မီးဖွားခြင်းမျိုးကို ၁၂၀၀၀ အထိ ကုန်ကျခံပေးမယ် ဆိုပါတယ်။
သိချင်သူများအတွက် ဒီနေရာမှာ သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။ AXA MaternityRider
လူနာတင်ကား ခေါ်ရင် ဘယ်လောက်အထိ ပေးမယ်။ ကင်ဆာဖြစ်ရင် တနှစ်ကို ဘယ်လောက် အထိ ကုသပေးမယ်။ ကျောက်ကပ် ဆေးရင် ဘယ်လောက် ဆိုတာမျိုးတွေ ကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့ အာမခံ အဆင့်အလိုက် သတ်မှတ်ပေးထားတာ ရှိပါတယ်။ နောက်တခုက အချို ့ပေါ်လစီတွေမှာ အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင် အိုင်စီယူ (Intensive Card Unit ) တက်ရင် အများဆုံး ၁၅ ရက်ပဲ တက်ခွင့်ရှိမယ် (၁၅ ရက်အတွင်း ကျသလောက်ပေးမယ်။ ကျော်ရင် ကိုယ်ဖာသာ ပေးရမယ်) ဆိုတာမျိုး။ အချို ့ကျတော့ အိုင်စီယူ ကျသလောက်ပေးမယ် ရက်ကန် ့သတ်မထားတာမျိုးပါ။
ရက်ကန့်သတ် မထားတာတော့ ပိုကောင်းပါတယ်။ ဖြစ်မှတော့ ဘယ်တော့ ပြန်ကောင်းမယ် ဆိုတာ ဘယ်သူမှ မသိနိုင်တဲ့ အရာမျိုးကိုး။
များသော အားဖြင့် ဆေးရုံ တက်တဲ့အခါ အရေးပေါ်လို မဟုတ်တဲ့ ကိစ္စမျိုးတွေမှာ ဆရာဝန်တွေ နဲ့ ရက်ချိန်းကြိုယူရပါတယ်။ အဲ့လို ဖြစ်ရပ်မျိုးမှာ ဆေးရုံမတက်ခင် အာမခံ ကုမ္ပဏီကို ကြိုတင် အကြောင်းကြားပြီး ထောက်ခံစာ Letter of Guarantee တောင်းထားရင်၊ အဲ့ဒီစာနဲ့ ဆေးရုံသွားတဲ့အခါ စဘော်ငွေ ပေးစရာမလိုတတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒါမျိုးတွေကိုလည်း အာမခံ မဝယ်ခင်သေချာမေးဖို ့လိုပါတယ်။ အရေးပေါ် ဗြုန်းစားကြီး ဖြစ်သွားရင် ရော ဘယ်လို ဘယ်နည်း ပိုက်ဆံသွင်းမလဲ၊ ဒါမှမဟုတ် အဲ့လို အရေးပေါ်ဖြစ်ရပ်တွေမှာ အာမခံ ကုမ္ပဏီက ဆေးရုံနဲ့ ဘယ်လို ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးမယ် ဆိုတာမျိုးတွေလည်း မေးဖို ့မြန်းဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
တကယ်ကတော့ ကျန်းမာရေး အာမခံ ထားတယ်ဆိုတာ လောင်းလိုက်တာပါပဲ။ ကိုယ့်မကျန်းမာမှုကို အာမခံ ဝယ်ပြီး ဆေးရုံတက်ရ မတက်ရ လောင်းတာပါပဲ။ ကျန်းမာရေး အာမခံ မှာ ဆေးရုံတက်ရပြီး ပိုက်ဆံ ကုန်တဲ့အခါ ကိုယ်မြတ်တယ် ပေါ့ဗျာ။ ဟော ကိုယ်ကျန်းမာပြီး ဆေးရုံမတက်ရတော့ ကိုယ်ရှုံးတယ်လို ့မတွက်ဘဲနဲ့ ကိုယ့်ပေးထားတဲ့ ပိုက်ဆံ နဲ့ သူများ နာမကျန်းဖြစ်တဲ့သူတွေကို ဆေးအလှုလုပ်ပေးတယ် လို့သဘောထားနိုင်ရင်ဖြင့် ပိုက်ဆံကုန်ပြီး ဒါနလည်း မြောက်နိုင်ပါတယ်။
ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် တတ်နိုင်သရွေ ့ကျန်းမာရွှင်လန်းပြီး ရောဂါဘယတွေ ကင်းရှင်း ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်း နဲ့ လက်လှမ်းမီ သမျှကျန်းမာရေး အာမခံ ကို အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။ စင်ကာပူမှာ နေတုန်း စိတ်ချရအောင် ကျန်းမာရေးအာမခံ ဝယ်ယူထားသင့်တယ်လို ့့တိုက်တွန်းရင်း
Dedicated Thanks to
ဤ လက်လှမ်းမီသမျှ ကျန်းမာရေး အာမခံ ဗဟုသုတများကို အသေးစိတ် ရှင်းပြပေးကြသော
NTUC Income မှ Ms. Tay Geok Hoon (geokhoon.ntuc@gmail.com/ geokhoon.tay@income.com.sg)
Prudential မှ ကိုကျော်ဇော (kyawzaw@gmail.com)
Prudential မှ ကိုကျော်သက်
Manulife မှ မနှင်းနှင်းဝေ (hninwai.ma@manulife.com.sg)
AXA မှ Ms. Yvonne Ang (yvonne.ang@axa.com.sg)
တို ့အား အထူးကျေးဇူး ဥပကာရ တင်ရှိပါကြောင်းနှင့်
စာရှုသူ အပေါင်း မရှင်းလင်းသည်များ အသေးစိတ် ထပ်မံ သိရှိလို သော အချက်အလက်များ ရှိပါကလည်း
အထက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ် များအား မေးမြန်း စုံစမ်းနိုင်ပါကြောင်း။
at Thursday, January 15, 2009 Labels: MM , Singapore Posted by nyimuyar 1 comments
တခါတမျိုး မရိုးနိုင်အောင် ကြားရသော ဇာတ်လမ်းများတွင် စိန့်မာတင်သွား တောလား သည်လည်း တခုအပါအဝင် ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ အမှတ် ၁၅ စိန့်မာတင် လမ်းသွယ်တွင် တည်ရှိသော စာရေးသူတို့နိုင်ငံသံရုံးက သုံးထပ်အဆောက်အဦ နှင့် ခြံဝင်းအတွင်းတွင် ခန့်ညားစွာ တည်ရှိလေသည်။ အဝင်၀ မှ သရက်ပင်ကြီးက အရိပ်ကောင်းစွာ ရစေသည်။
တနှစ်တခေါက် ကိုယ့်မြေ ကိုယ့်ရေ နှင့် မိဘများထံ ပြန်ချင်သူတဦးအနေဖြင့် မရောက်မဖြစ် ရောက်ရသော နေရာလည်း ဖြစ်သည်။ ယခုနှစ် ထုံးစံအတိုင်း မပြန်ခင် တခေါက် စာရေးသူတို ့ဇနီးမောင်နှံ ရောက်သွားတော့ ဝေလီဝေလင်း ပင်ရှိသေးသည်။ မိုးလင်းကာစ သစ်ရိပ်ဝါးရိပ် နှင့် ကြေးငှက်ကလေးများ မြည်သံ၊ လေနုအေးလေးများလည်း တိုက်ခတ်နေသေးရာ ရန်ကုန်က တရားရိပ်သာ တခုခု ထဲရောက်သွားသလိုပင် ခံစားရမိကြောင်း သက်ထားက ဆိုလေသည်။
ကိုယ်တွေလိုပင် စောင့်ဆိုင်းနေသူများ တော်တော်များနေပြီ။ မနက် ၈ နာရီထိုးတော့ သံရုံးတံခါးဖွင့်ပေးသည်။ ဒရဝမ် အဖိုးအိုကြီးက သံရုံးတံဆိပ် ရိုက်နှိပ်ထားသော နံပါတ်စဉ်ရေးသည့် စာရွက်တွဲတခု ထုတ်လာပေးသည်။ အဲ့ဒီထဲမှာ ဦးရာလူ ရေးပေတော့။ ည ၁၂ နာရီ နာရီပြန်တချက် သံရုံးအပေါက်ဝမှာ လာရေးသည့် စာရွက်က အတည်မဟုတ်။ ယခု သံရုံးတံဆိပ်တုံးပါ စာရွက်ကမှ အတည်ဖြစ်သည်။ အထူးသတိပြုဖွယ်ပင်။ သံရုံးသည် တိုင်းတပါးတွင် နိုင်ငံကိုယ်စားပြုဖြစ်လေရာ နိုင်ငံတော်နှင့် ယှဉ်၍ မငြင်းလေနှင့်၊
လိုအပ်သည့် လျှောက်လွှာကို ယူပြီးဖြည့်စွက် စောင့်ဆိုင်းနေရုံပင်။ ၂၀၀ရ လောက်မှ ထားပေးသော မိတ္တူကူးစက်မှာ လိုအပ်က ကူးနိုင်သေးသည်။ သံရုံးဝန်ထမ်းများ ရောက်ပြီး သူရို ့လုပ်ဆောင်ဖွယ်ရာ ကိစ္စလေးများ ပြီးလျှင် ၉ နာရီခွဲလောက်မှာ စပြီး အလုပ်လုပ်ပေးတော့သည်။
နံပါတ်စဉ် ရေးထားသည့် စာရွက်အတိုင်း တခါလျှင် လူ ၅ ဦး ခေါ်သည်။ နာမည်ခေါ်လျှင် လိုအပ်သည် ပူးတွဲတင်ပြခိုင်းသည့် စာရွက်စာတမ်းများပြ ပြီးလျှင် အခွန်ဆောင်ရမည့် ငွေကို တွက်ချက်ပေးလိမ့်မည်။ စာရွက်စာတမ်းများ ပြည့်စုံလျှင် အပိုစကားများ ပြောဖို ့မလိုအပ်ဘူးပေါ့။ ပြီးလျှင် ငွေပေးချေဖို ့စောင့်ဆိုင်းရုံပင်။ ငွေပေးချေပြီး အခွန်ထမ်းဆောင်ထားကြောင်း အထောက်အထားယူ ပြီးလျှင် နိုင်ငံတာဝန်ကို ကျေပွန်သည့် အခွန်ထမ်းပြည်သူတဦး အဖြစ် ဂုဏ်ယူစွာ ပြန်လာနိုင်ပေပြီ။
ကျောင်းသားများက နံပါတ်စဉ်စာရွက်မှာ လုံး၀ရေးစရာမလိုဘူး။ တက်နေတဲ့ ကျောင်းက ကျောင်းသားဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံစာ အပြည့်အစုံ အစစ်အမှန်သာ ပါသွားပါစေ။ စောင့်ဆိုင်းစရာလဲ မလိုအပ်ပါ။ အထူးစီစဉ်ပေးထားတာ တွေ ့ရပါတယ်။
ဒီတခေါက်သိလာတာကတော့ အက်စ်ပါ့စ် ၈၀ ကနေ ၁၁၀၊ အီးပီ ၁၁၀ ကနေ ၁၂၀။ ပီအာ ၁၂၀ ကနေ ၁၅၀ မဖြစ်မနေဆောင်ရမယ် သတ်မှတ်ထားတယ်။ လျှော့ဆောင်လို ့မရဘူး။ ဒါပေမယ့် အခွန်ဆောင်မယ့် လကိုတော့ ကြိုက်သလောက် သတ်မှတ်ဆောင်လို ့ရတယ်။ (၃လ ၆လ ၉ လ ၁နှစ် နှင့် အထက်) စသဖြင့်ပေါ့။ ဘယ်သူမှ တကူးတကန့်သွားပြီး တလထဲတော့ ဆောင်မယ်မထင်ပါဘူး၊ ဆိုတော့ သုံးလ လောက်က အနည်းဆုံး စဆောင်လို ့ရတာပေါ့။ သက်တမ်းတိုးမယ် ဆိုရင်တော့ လက်ရှိလ နဲ့ အနီးဆုံး ၃လကနေ ၆လလောက် ခွာပြီးဆောင်လို ့ရတယ်ဆိုပါတယ်။
ယခုတခေါက်အသွားမှာ စာရွက်စာတမ်းအချို့မိတ္တူမကူးသွားမိတာတွေ ရှိတော့ မိတ္တူကူးစက်များမကောင်းရင် ဆိုပြီး စိတ်ပူရသေးတယ်။
ဒါနဲ့ပဲ လျှောက်လွာအချို ့က လိုအပ်တာလေးတွေ ရေးမှတ်လာခဲ့တယ်။
၁။ ဝင်ငွေခွန်ထမ်းဆောင်ခြင်းနှင့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် သက်တမ်းတိုးခြင်းများအတွက်
က) WP/SP/EP/PR Card(မူရင်း၊ မိတ္တူ)
ခ) နိုင်ငံကူးလက်မှတ် (ဓာတ်ပုံကပ်ထားသော စာမျက်နှာနှင့် သက်တမ်းပါရှိသော စာမျက်နှာ)မိတ္တူ
ဂ) (အသစ်ဖြစ်ပါက) အလုပ်ခန့်စာ (မူရင်း၊မိတ္တူ)
ဃ) နောက်ဆုံး ဝင်ငွေခွန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် ပြေစာ၊ ထောက်ခံစာ (မူရင်း၊ မိတ္တူ)
၂၊ မှီခိုအဖြစ် နေထိုင်ကြောင်း ထောက်ခံစာ (မှီခိုများ အတွက် အလုပ်မလုပ်ကြောင်း ထောက်ခံစာ)
က) အခွန်ထမ်းဆောင် နေသူနှင့် တော်စပ်ပုံ အထောက်အထား(မူရင်း၊မိတ္တူ) - လက်ထပ်စာချုပ်၊ အိမ်ထောင်စုစာရင်း (မိဘများအတွက်)
ဂ) နောက်ဆုံး ဝင်ငွေခွန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် ပြေစာ၊ ထောက်ခံစာ (မူရင်း၊ မိတ္တူ)
၃၊ ခေတ္တနေထိုင်သူများ အလုပ်မလုပ်ကြောင်း ထောက်ခံစာ (အလည်လာသူများအတွက်)
က) နိုင်ငံကူးလက်မှတ် (ဓာတ်ပုံကပ်ထားသော စာမျက်နှာနှင့် သက်တမ်းပါရှိသော စာမျက်နှာ)မိတ္တူ
၄။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် စာမျက်နှာကုန်ဆုံး၍ အသစ်ထုတ်ခြင်း
က) ကိုယ်ရေးရာဇဝင် နှင့် ဓာတ်ပုံ (၂)ပုံ
ဃ) မှီခိုသူများ ဖြစ်ပါက (အိမ်ထောင်စုစာရင်း၊ လက်ထပ်စာချုပ် မိတ္တူ များ
၅၊ မွေးဖွားပြီး ကလေး မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ်၊ မိခင်၏ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွင် အမည်ဖြည်သွင်းခြင်း (မိတ္တူ ၂စုံ ပေးရမည်)
က) မွေးစာရင်း (မူရင်း၊ မိတ္တူ)
ခ) ကလေး ကိုယ်ရေးရာဇဝင် နှင့် ဓာတ်ပုံ
မိဘ ၂ဦးလုံး၏ -
ခ) အခွန်ပြေစာ မိတ္တူ
ဂ) လက်ထပ်စာချုပ် မိတ္တူ
နိုင်ငံသား စွန့်လွှတ်တာတော့ လုပ်ဖြစ်မှာ မဟုတ်လို့ကူးမလာပါဘူး။
အသိအမှတ် မပြူသည့် နိုတြီ ဘာသာပြန် ရှေ ့နေများ
နိုတြီ စစ်မှန်ကြောင်း ထောက်ခံစာ တောင်းရာတွင် နေပြည်တော် နိုင်ငံခြားရေးရုံး၏ တံဆိပ်တုံးပါရမည်။
မြန်မာသံရုံး (စင်ကာပူ) အင်တာနက်လိပ်စာ
at Wednesday, January 14, 2009 Labels: MM , Singapore Posted by nyimuyar0comments
တိရိစ္ဆာန်ရုံ နဲ့ နိုက်ဆာဖာရီ အပြေးပွဲ အခမ်းအနား
ဖေဖော်ဝါရီလ ၇ ရက်နေ ့ညနေမှာ စင်ကာပူ တိရိစ္ဆာန်ရုံ နဲ့ နိုက်ဆာဖာရီ မှာ အပြေးပွဲ ရှိပါတယ်။ ပြိုင်တဲ့ သဘောမျိုးပွဲ မဟုတ်ဘဲနဲ့ အထိမ်အမှတ် အခမ်းအနား လိုမျိုးပြေးပွဲပါ။
အဲ့ဒီ ပွဲကို Pink Apple လိမိတက် နဲ့ စင်ကာပူ သားရဲတိရိစ္ဆာန် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲတို ့က ပူးပေါင်း ကြီးမှုးကျင်းပမှာပါ။ ပြိုင်ပွဲအတွက် လျှောက်လွာတွေကို စတင်လက်ခံနေပြီး အစကနေ အဆုံးပန်းဝင်အောင် ပြေးတဲ့ လူတွေကို ကံစမ်းမဲဖောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ လူ ၆၀၀၀ လောက် ပါဝင်ဆင်နွဲကြမယ်လို ့လည်း မျှော်လင့်ထားတယ် ဆိုပါတယ်။
၆.၂ ကီလိုမီတာ ရှည်တဲ့ ပြေးလမ်းမှာ နိုက်ဆာဖာရီ ဖက် ကို ၃.၂ ကီလိုမီတာ အရင်ပြေးရမှာ ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ပြေးလိုကပြေး။ အနှေးပြေးလိုကပြေး၊ လမ်းလျှောက်လို ကလည်း လျှောက်နိုင်တယ် ဆိုပါတယ်။
လျှောက်လွှာတင်ခ အဖြစ်(ဝင်ကြေးပေါ့ဗျာ) လူကြီး(အသက် ၁၃ နှစ် နှင့်အထက်) တဦးကို စလုံး ၃၈ ဒေါ်လာ၊ ကလေး (၃နှစ်မှ ၁၂ နှစ်ထိ) တဦးကို ၁၈ ဒေါ်လာ ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ ဝင်ကြေးထဲမှာ စင်ကာပူ တိရိစ္ဆာန်ရုံ အထိမ်းအမှတ် တီရှပ်တထည်၊ ကြီးမှုးကျင်းပတဲ့ လိမိတက် ရဲ့လက်ဆောင် များပါဝင်တဲ အိတ်တလုံး၊ ဒစ်စကောင့် ကဒ်တခု နဲ့ အဲ့ဒီ နေ့မှာပဲ လာရောက်လည်ပတ်မယ့် မိသားစုဝင်တွေ မိတ်ဆွေတွေကို ၅၀ ရာခိုင်နှန်း လျှော့ဈေးနဲ့ ဝင်ရောက်လည်ပတ်နိုင်မယ့် အခွင့်အရေးတို ့ရမှာဖြစ်တယ်လို ့ရေးထားပါတယ်။
အသေးစိတ်ဖတ်ရှုလိုသူများ စိတ်ပါဝင်စားသူများ ဒီနေရာမှာ ကြည့်ပါ။
80 Mandai Lake Road S729826
Tel: (65) 6269 3411
Fax: (65) 6365 2331
Co. Reg. No. 20005890K
SINGAPORE ZOO AND NIGHT SAFARI OFFER VENUE FOR INAUGURAL
SAFARI ZOO RUN ON FEB 7, 2009
Singapore, January 9, 2009 - Singapore Zoo and Night Safari are opening its
doors for runners, joggers and walkers for the first time ever on February 7,
2009 at the inaugural Safari Zoo Run. The run is organised by Pink Apple Pte
Ltd and part of the proceeds will go towards the care of endangered animals
at Night Safari and Singapore Zoo.
The inaugural Safari Zoo Run isanon-competitive run open to members of
the public. It is non-competitive so that parents, families and children can participate in this event to bond and spend time, and also to encourageahealthy lifestyle through walks, jogs or runs.
“Singapore Zoo and Night Safari are located on 68 hectares of lush greenery
overlooking the Upper Seletar Reservoir, and participants will be soaking in
the beauty of nature during their jogs. We are pleased to offer our venues for
families and individuals to enjoy the wonders of the parks inadifferent way.
As Ah Meng was Singapore Zoo’s icon, we are glad that the run will not only
remember her but will aid in conservation causes,” said Ms Fanny Lai, Group
CEO, Wildlife Reserves Singapore.
Spanninga6.2 km route that traverse the tram route across both parks, the
run will begin at the coach bay area between Night Safari and Singapore Zoo
covering the 3.2 km run at Night Safari before continuing with the Singapore
Zoo route. Participation is open across all ages and is not segmented into categories. With an expected turnout of approximately 6,000 participants, both parks have in place multiple first aid and water points.
With the flag-off at4pm, runners will have the luxury to complete the run by 5
pm for Night Safari and by6pm for Singapore Zoo. As the Safari Zoo Run is
a non-competitive run,alucky draw will be held at the end of the run. Three
participants whose numbers are called will walk away with 42-inch TV,avideo
camera andahome entertainment set in the order the number is called,
Registration is now open. As health and safety isaconcern, participants
below 21 years old will need to obtain parental or guardian consent. The
indemnity form can be downloaded from Safari Zoo Run website below.
Registration fee for adult (13 years and above) is at S$38 and for child (3-12
years) is S$18. The entry pack will come with an exclusive Safari Zoo Run
number tag, exclusive Singapore Zoo polo T-shirt, goody bag with sponsored
items, free3years PAssion membership card and 50% discount on admission
fee to the park on same day visit for friends and family of participants*, and
For more information on rules and regulations, prospective participants can
log on to http://www.safarizoorun.com.sg
* To produce participant’s number bib to enjoy 50% discount for Night Safari
For online registration with credit card payment, kindly log on to:
For Walk-in registration outlets: Running Lab (Cash Payment only)
109 North Bridge Road #03-20
Tel: (65) 6336 6775
Fax: (65) 6336 6885
Sun to Wed: 11.00 am - 8.30 pm
Thurs to Sat & Eve of PH: 11.00 am - 9pm
238 Thomson Road #01-47
Tel: (65) 6253 1998
Fax: (65) 6253 1558
Sun to Thur: 11.00 am - 9.00 pm
Fri, Sat & Eve of PH: 11.00 am -9pm
CONTACT: Ms Eileen Bakri / Ms Yu Poh Leng
DURING OFFICE HOURS: 6534-5122 (Office)
AFTER OFFICE HOURS: 9781-0737 / 9667-5837 (Mobile)
at Saturday, January 10, 2009 Labels: MM , Singapore Posted by nyimuyar6comments
ez-link card တွေ စပြီး လဲပေးနေလို့ဒီညနေပဲ စီးတီးဟော ဘူတာက လက်မှတ်ကောင်တာ (Ticket Office) မှာ သွားလဲ လိုက်တယ်။ နာရီဝက်လောက် တန်းစီ ပြီးတော့ မှ ကိုယ်တွေ အလှည့်ရောက်တယ်။ လူတွေ ကလည်း အသစ် လဲပေးတယ် ဆိုတော့ တန်းစီကြတာပေါ့။
ရလာတဲ့ ကဒ်အသစ်လေးက စီမ်းပြာလေးပါ၊ ကဒ်ဟောင်းထဲက ငွေတွေကို ကဒ်အသစ်ထဲ ပြောင်းပေးလိုက်တယ်။ နဂို စဘော် ငွေ လို အပေါင် သဘောမျိုး ပေးထားတဲ့ ၃ ဒေါ်လာလဲ ပြန်ထဲ့ပေးလိုက်တယ်။ ကဒ်အသစ် က စဘော်ငွေ သုံးဒေါ်လာ မရှိတော့တဲ့ အတွက် အထူးသတိထားဖို့လိုပါတယ်။ ဒီကိစ္စက တော်တော် သတိထားရမယ့် ကိန်းပဲ။ မေ့တတ်ပုံနဲ့ တော့ ဟုတ်နေပါပြီ။
ကဒ်ထဲမှာလက်ကျန်က ၅ ဒေါ်လာအောက် နည်းနေပြီဆို ကား စီးတဲ့အခါ ကားပေါ်က စက်က စီမ်းဝါရောင်အချက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အနည်းဆုံး ၃ ဒေါ်လာရှိမှ ကား၊ရထား စီးသင့် တယ်လို့လည်း လက်ကမ်းစာရွက်မှာ အကြံပေးထားပါတယ်။
ကဒ်အသစ်မှာ ၂၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၀၉ ကနေ စလို့ခရက်ဒစ်ကဒ် တွေ ဂျိုင်ယို(Giro) ငွေပေးချေ မှုတွေ နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားပြီး အလိုအလျှောက် ပိုက်ဆံဖြည့်တင်း တဲ့ စံနစ်တွေ ကျင့်သုံးထား နိုင်ပါမယ်တဲ့။ ကဒ်ပျောက် တာတို့ခရက်ဒစ်ကဒ်တွေ နဲ့ မဟုတ်မမှန် အသုံးပြုတာတို့ကို ကာကွယ်ဖို ့အတွက် အီဇီး ရှီး (EZ-Link CardShield)အကာကွယ် အာမခံ ကို တရက်ကို ၁၅ ဆင့် နဲ့ ဝယ်ယူ ကာကွယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကဒ်အသစ်က နံပါတ်ကို အသုံးပြုပြီး အီဇီးလင့်ခ် အင်တာနက် စာမျက်နှာမှာ အကောင့်အသစ်ဖွင့် မှတ်ပုံတင်လိုက်မယ်ဆိုရင် မတော်တဆမှုကြောင့် ရာသက်ပန် ဒုက္ခိတ ဖြစ်မှု (accidental Permanent Total Disability insurance coverange) ကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ အာမခံကို ၆ လ အလကား ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး၊ အဲသလိုများ ဒုက္ခိတ ဖြစ်သွားရင် အလျှော်ငွေ ၅၀၀၀ ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ် လို့ဆိုထားပါတယ်။
ကဒ်အသစ်ကို အရင်ကဒ်အတိုင်း သုံးလို ့ရတဲ့ နေရာတိုင်းမှာ သုံးလို ့ရနိုင်မယ့် အပြင် မော်တော်ယာဉ်တွေ မှာ သုံးစွဲမယ့် နောက်မျိုးဆက်သစ် စက်တွေမှာလည်း သုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၁) ကဒ်ထဲမှာ စဘော်ငွေ တပြားမှ ချန်ထားဖို ့မလိုအပ်ပါဘူး။
၂) မော်တော်ယာဉ်တွေ မှာ သုံးစွဲမယ့် မျိးဆက်သစ် လမ်း တံတားဖြတ်သန်းခ စက်တွေ နဲ့ အဆင်ပြေစွာသုံးနိုင်မယ်။
၃) ကဒ်ထဲမှာ အများဆုံး ငွေ ၅၀၀ ထည့်ထားလို ့ရပါမယ်။
၁) အများသုံး ဘက်စ်ကား၊ ရထား များမှာ ချက်ခြင်းသုံးနိုင်ပါမယ်။
၂) ကျောင်းကန်တင်းတွေ ၊ ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းများ၊ စားသောက်ဆိုင် များမှာ ၂၀၀၉ ပထမ သုံးလပါတ်အတွင်း စသုံးနိုင်ပါမယ်။
၃) ဆဲဗင်းအလဲဗင်း ဆိုင်တွေ၊ လမ်းတံတားခတွေ ၊ အက်စ်အမ်တာတီ အငှားယာဉ် တွေ ၊ ကျောင်းစာအုပ်ဆိုင်များ ၊စာကြည့်တိုက် တွေ နဲ့ မက်ဒေါ်နယ် စားသောက်ဆိုင်တွေ မှာ ၂၀၀၉ ဒုတိယ သုံးလပါတ်အတွင်း စသုံးနိုင်ပါမယ်။
၄) အအေး ရောင်းစက်တွေ ၊ ရေကူးကန်တွေ နဲ့ ဆေးရုံတွေ မှာ ၂၀၀၉ တတိယ သုံးလပါတ်အတွင်း စတင် သုံးနိုင်ပါမယ်။
အဲသလို လက်ကမ်းကြော်ငြာ စာရွက်မှာ ဖော်ပြပါရှိတာကို အညောင်းခံ ရေးသားရင်း ပို့စ်တခု တင်လိုက်ပါတယ်။
images from: www.ezlink.com.sg, www.transitlink.com.sg
at Thursday, January 08, 2009 Labels: EN , Singapore Posted by nyimuyar0comments
(for Health & Life Insurance Purpose)
3. Coronary artery by-pass surgery
7. Paralysis (Loss of use of limbs)
8. Heart Valve surgery
10. Deafness (Loss of hearing)
11. Loss of speech
13. Fulminant Hepatitis
14. Major Organ/Bone Marrow Transplantation
15. Primary Pulmonary Hypertension
16. Alzheimer's Disease/ Sever Dementia
17. Surgery to Aorta
18. Major Burns
19. Terminal Illness
20. HIV acquired through blood transfusion and occupation
21. End Stage Liver Failure
22. End Stage Lung Disease
23. Muscular Dystrophy
25. Aplastic anaemia
26. Angioplasty (Partial Payment)
& other invasive treatment for coronary artery)
30. Motor Neurone Disease
at Thursday, January 08, 2009 Labels: MM , Singapore Posted by nyimuyar6comments
ကျန်းမာရေး အာမခံ ထားမယ်လည်း ဆိုရော ပြောပြပေးမယ့် သူမရှိ အကြံပေးတဲ့ သူမရှိ နဲ့ ဗဟုသုတ ကလည်း မပြည့်စုံတော့ တော်တော်ပဲ အခက်တွေ ့ပါတယ်။ ဒါနဲ့ ထုံးစံအတိုင်း အင်တာနက်ပဲ အားကိုးရ ပြန်ပါတယ်။ ရှာရင်းဖွေရင်း လေ့လာရင်း နဲ့ တော်တော်တန်တန် သိလာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချို့အချက်တွေကို တော့ နားမလည်ဘူး ဖြစ်ပြန်ရော။
ဒါနဲ့ ပဲ အသိတယောက် ကို ပြောတော့ Prudential က ကိုကျော်သက်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။ ကိုကျော်သက် နဲ့ ၂ ခေါက်လောက် ဆုံအပြီး မှာ တော်တော်များများ သိလာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်လိုချင်တာ ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုသလို ဖြစ်ပြန်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ နဲနဲ ထပ်သိလာတဲ့ ဗဟုသုတ လေးတွေ နဲ့ ဆက်ပြီး ဖတ်မှတ် လေ့လာ စုံစမ်းဖြစ်သွားပါတယ်။ နောက်ထပ် Ntuc Income က Ms Tay Geok Hoon ရယ် Prudential ကပဲ ကိုကျော်ဇော ရယ် နောက် Manulife က မနှင်းနှင်းဝေ တို့နဲ့လည်း ဆက်ပြီး စုံစမ်း မေးမြန်းဖြစ်သွားပါတယ်။
စာရေးသူ ကလည်း ကျန်းမာရေး အာမခံမို ့လို ့သာ မရှိမဖြစ် ထားရမယ်၊ ကျန်တဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုတွေကိုလည်း စိတ်မဝင်စားဘူးကိုး။ ဖြစ်ချင်တော့ အာမခံ ရောင်းတဲ့ အေးဂျင့်တွေ အများစု ကလည်း ကျန်းမာရေး အာမခံ ဖြစ်တဲ့ ဆေးရုံတက်စားရိတ် အာမခံ က ဈေးအနည်းဆုံး ဆိုတော့ ကော်မရှင်လည်း နည်းတယ်ပေါ့။ ဖြစ်နိုင်ရင် သူတို ့ဖက်ကလည်း ပေးရတဲ့ အချိန် နဲ့ ကိုက်အောင် ကော်မရှင်များများ ရတဲ့ အခြား ရင်းနှီး မြှုပ်နှံ မှု ပါတဲ့ ကျန်းမာရေး ကာကွယ်မှု အာမခံတွေ ထားစေချင်တာ မဆန်းပါဘူး။
တကယ်က ကျန်းမာရေး အာမခံ ဆိုတာ နယ်ပယ် သိပ်ကျယ်ဝန်းတော့ သူတို ့က အပိုင်းတွေ ခွဲချလိုက်ပါတယ်။ ယေဘုယျ ပြောရရင် ဆေးရုံတက် ရင် ကုန်ကျစားရိတ်တွေ အတွက် ထားကြတဲ့ ဆေးရုံတက်စားရိတ် အာမခံ (Hospitalization Insurance) က အခြေခံပါပဲ။ နောက်တဆင့် ကျတော့မှ အခြား ကာကွယ်မှုတွေ ဖြစ်တဲ့ ဆေးရုံတက်နေတုန်း ပိုက်ဆံ ပေးမယ့် အာမခံတို ့။ နာတာရှည်ဖြစ်ရင် ကုပေးမယ့် အာမခံ တို ့။ ပြင်းထန်တဲ့ ရောဂါကြီး ၃၀ အတွက် အထူးသီးသန့်အာမခံ တို့အဲသလို တွေ ခွဲထားကြပါသေးတယ်။ စင်ကာပူအစိုးရ က သတ်မှတ် ထားတဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ ရောဂါကြီး ၃၀ ကို သိလို သူများ ဒီမှာ ဖတ်ပါ။
စင်ကာပူ မှာ အာမခံ ကုမ ္ပဏီတွေ အများကြီးပါပဲ။ စင်ကာပူ နာမည်ကြီး ဂရိတ် အိစတန် (Great Eastern)၊ စလုံး အခြေစိုက် NTUC Income ၊ ဗြိတိန် က Prudential၊ ကနေဒါ က Manulife၊ ပြင်သစ် AXA၊ ယူကေ ကပဲ ဖြစ်တဲ့ Aviva ၊ နောက် အမေရိကန် က AIA နဲ့ အခြား အများကြီး ရှိပါသေးတယ်။
အဲ့ဒီမှာ AIA ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံသား မည်သူ ကို မဆို အာမခံ မရောင်းပါဘူး၊ အမေရိကန် ကုမ ္ပဏီဖြစ်လို့စီးပွားရေး ပိတ်ဆို ့ထားတဲ့ အတွက် ပါတဲ့။
ကျန်းမာရေး အာမခံ ကုမ ္ပဏီတွေ မှာ CPF အဖွဲ ့အစည်းက Medisave အသိအမှတ် ပြု နဲ့ အသိအမှတ် မပြု သော ဆိုပြီး လည်း ရှိတယ်။ အများအားဖြင့် ကတော့ စီပီအက်ဖ် Medisave အသိအမှတ်ပြု တွေ များပါတယ်။
Madisave (CPF) အသိအမှတ်ပြု ပီအာ နဲ့ နိုင်ငံသား ဆိုရင် စီပီအက်ဖ် ထဲကနေ အခြေခံ အာမခံ ကို ဝယ်လို ့ရမယ် ဆိုတာမျိုးပါ။
စင်ကာပူ က ဆေးရုံတက်စားရိတ် ကျန်းမာရေး အာမခံ တွေက ကိုယ်ဆေးရုံတက်လို့ပေးရမယ်ဆိုရင် ပေးရတဲ့ ငွေကို အဆင့်တွေ ခွဲပေးထားပါတယ်။ ကနဦး ကိုယ်တိုင် ပေးရငွေ လို့ခေါ်လို ့ရမယ့် Deductible အဆင့် ရယ် ။ အဲ့ဒီ ကနဦး ပေးငွေ ကို နှုတ်ပြီး ကျန်တဲ့ ပိုက်ဆံ ရဲ့ ဆယ်ရာခိုင်နှုန်း စားရိတ်မျှပေးရတဲ့ Co-Insurance အဆင့်ရယ်။ ကျန်တာကို မှ အာမခံ အဖွဲ့အစည်းက ပေးရတဲ့ Insure Payable အဆင့်ရယ် ဆိုပြီး ရှိပါတယ်။
ဥပမာ ဆေးရုံတက်လို့ငွေ ၁၀၀၀၀ (တစ်သောင်း) ကုန်ကျတယ် ဆိုပါစို ့၊ အဲ့ဒီမှာ ကနဦး ကိုယ်ပေးရငွေကို ဝယ်ထားတဲ့ ပေါ်လစီ ပေါ်မူတည်ပြီး အနည်းဆုံး ၁၅၀၀ ကနေ အများဆုံး ၃၀၀၀ လောက် အထိဖြတ်ပါတယ်။ ၃၀၀၀ ပဲ ထားပါ။ အဲ့ဒီ ၃၀၀၀ ကို ကိုယ်က ကနဦး (Deductible) ပေးရပါမယ်။
တစ်သောင်း ထဲက သုံးထောင် နှုတ် တော့ ကျန်တဲ့ ၇၀၀၀ ရဲ့ဆယ်ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်တဲ့ ၇၀၀ (ခုနှစ်ရာ) ကို Co-Insurance စားရိတ်မျှပေး အနေတဲ့ ပေးရပါဦးမယ်။ ကျန်တဲ့ ၆၃၀၀ ကိုမှ အာမခံ အဖွဲ့ အစည်းက ပေးမှာပါ။ ကိုယ်က ၃၇၀၀ ပေးရပါတယ်။ ဒါက အခြေခံ ဝယ်ထားတဲ့ ကျန်းမာရေး အာမခံပါ။
ကိုယ်က အဲသလို ပေးရတဲ့ ကနဦး ပေးငွေတွေ မပေးချင်ဘူး ဆိုရင် နောက် ထပ် အဆင့်မြင့် အာမခံ တမျိုး ထပ်ဆောင်း ဝယ်ရပါတယ်။ ဆိုင်ရာအလိုက် Rider ရိုက်ဒါ တို့Pluse ပလပ်စ် တို့အမျိုးမျိုးခေါ် ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီ အာမခံ လေး နဂို အခြေခံ နဲ့ တွဲဝယ်ရင် ခုဏလိုမျိုး ဆေးရုံတက် ကုန်ကျစားရိတ်မှာ ၃၀၀၀ ကို သူတို ့က ထပ်ပေးသွားပေးပါတယ်။ ဆိုတော့ ၉၃၀၀ ကို အာမခံ အဖွဲ့ အစည်းက ပေးသွားမှာပါ။ ကိုယ်ကတော့ ဆယ်ရာခိုင်နှုန်း စားရိတ်မျှပေးတဲ့ အဆင့်လေးပဲ ပေးရတော့မှာပါ။
အဲ့ နောက်တဆင့် အဲ့လို စားရိတ်မျှပေးတဲ့ အဆင့်ကိုယ် တောင်မှ မပေးချင်ဘူး ဆိုရင်လည်း နောက် တမျိုး ထပ်တိုး လို့ဝယ်လို ့ရပါသေးတယ်။ အချို့ကုမ ္ပဏီတွေ ကျတော့လည်း အဲ့လို ကနဦး ပေး ငွေ အဆင့် နဲ့ ထပ်ဆောင်း ပေးငွေ အဆင့် ကို ပေါင်းထားတဲ့ ဟာမျိုးလည်း ရောင်းပါသေးတယ်။ အဲ့လို မျိုး ကိုယ်က တပြားမှ ပေးစရာ မလိုတော့ တာမျိုးကို သူတို့အခေါ် Full Coverage လို ့ခေါ်ကြပါတယ်။
အချို့သော အာမခံ ပေါ်လစီ တွေမှာကျတော့ စဝယ်ကတည်း က အားလုံး ဖူးကာဗာရေ့ခ်ျ အကာအကွယ်ပေးတဲ့ ဟာမျိုးပဲရောင်းတာပါ။ ခေါင်းစား စရာ တွက်စရာမလို တော့ဘူးပေါ့။ မန်နူလိုက်ဖ် ဆို အဲလိုမျိုးရောင်းပါတယ်။
အာမခံ ဝယ်တော့မယ်ဆို အခြားသတိ ပြုစရာလေးတွေ ရှိပါတယ်။ ဘယ်လောက် ကာဗာ ပေးသလဲ။ ဘယ်လောက် အထိ အကာကွယ် ဖြစ်မလဲ ဆိုတာပါပဲ။ ပေါ်လစီ တိုင်းမှာ ပါတာက နှစ်အလိုက် နှစ်စဉ် အများဆုံး Annual Limit ငွေ ဘယ်လောက် အထိ ပေးပါမယ့် ဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက် ရှိပါတယ်။ အနည်းဆုံး နှစ်သောင်း လောက်ကနေ အများဆုံး ၁ သန်းလောက် အထိကို နှစ်အလိုက် အမြင့် ဆုံး ပေးလျှော် မယ့် ငွေ ကို သတ်မှတ် ထားပါတယ်။
နောက်တခုက အာမခံ ထားသူ တဦး ရဲ့ ဘဝ တလျှောက် အများဆုံး Lift Time Limit ပေးလျှော်မယ့် ငွေပမာဏပါ။ အချို့က တသိန်းခွဲ ကနေ ကန့်သတ်ချက်မဲ့ အထိ ရှိပါတယ်။ သဘောက ပေါ်လစီ တခုက တနှစ်ကို အများဆုံး လေးသောင်း ပေးလျှော် မယ် ဆိုပါစို့။ အဲ့ဒီ ပေါ်လစီမှာပဲ ဘဝတလျှောက် အများဆုံး ၂ သိန်းပဲ လျှော်မယ်ဆိုပြီး လည်း သတ်မှတ် ထားပြန်တယ် ဆိုရင် ။ အဲ့ဒီ ပေါ်လစီ ဝယ်ထားတဲ့ သူအတွက် ၅ နှစ် ဆက်တိုက်ပဲ (တနှစ် လေးသောင်း ၅နှစ် = နှစ်သိန်း) အာမခံ ဝယ်လို ့ရမှာပါ။ ၅ နှစ်ကျော်သွားရင် မပေးလျှော်တော့ပါဘူး။ ၅ နှစ်ဆက်တိုက် အဲ့သလောက်ကြီး နာမကျန်း ဖြစ်တယ် ဆိုလည်း ဒီလူ ဒီဘဝမှာ မရှိနိုင်တော့ ဘူးရယ် လို ့လည်း အာမခံ ပေါ်လစီ ရောင်းသူများက ပြုံးရယ်ပြီး ရှင်းပြကြပါလိမ့်မယ်။ Life Time unlimit အန်လစ်မစ်တစ် ကန့်သတ်ချက်မဲ့ ကတော့ ပိုစိတ်အေးစေတာ အမှန်ပဲ ဖြစ်မှာပါ။
အန်တီယူစီ အင်ကမ်း (Ntuc Income) ကတော့ ပေးရတဲ့ ဈေးအနည်းဆုံး နဲ့ ကာဗာဖြစ်မှု ရယ် ပေးလျှော်တဲ့ နှစ်စဉ်ငွေရယ်ဟာ အချိုးများပါတယ်။ တန်တယ် ပြောရမှာပေါ့။ သူမှာ ဘဝ တလျှောက် အများဆုံး ကန့်သတ်တဲ့ ငွေ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူက အဆင့် တွေ ခွဲ ထားတဲ့ အတွက် အနည်းဆုံး ပေါ်လစီက ပေးမယ့် အခြေခံ အဆင့်ရယ်။ ကနဦး ပေးငွေ ပေးတဲ့ အဆင့် (ရိုက်ဒါ) ရယ်ကို တော့ ဝယ်ရမှာပါ။ အင်ကမ်းက တခုကောင်းတာက သူ ့မှာ ကနဦးပေးငွေ Deductible Cap ကို နှစ်တနှစ်မှာ အများဆုံး သုံးထောင် အထိပဲ ပေးလို့ သတ်မှတ်ထားတာပါ။ ဒါကြောင့် ကနဦးပေး ငွေ ရိုက်ဒါ မဝယ်ထားတဲ့ သူ တောင်မှာ တနှစ် ကို ၃ ခါ လောက် ဆေးရုံတက်လည်း အများဆုံး ငွေ တခါပဲ ပေးထားရုံပါပဲ။
ပေါ်လစီ ကို နာမကျန်းဆိုးဆိုးရွာရွား ဖြစ်နေဆဲ ကာလမျိုးတွေမှာတောင်မှ သက်တမ်းတိုး ဖို ့ရာ အာမခံ ပါတယ် ဆိုတဲ့ Guaranteed Renewability ဆိုတာပါပဲ။ ဥပမာ လူတဦး အာမခံ ပေါ်လစီ ဝယ်ထားတယ်။ ပထမ ပေါ်လစီ ဝယ်တုန်း ၆ လလောက်အကြာမှာ နာမကျန်းဖြစ်တယ် ငွေတွေ သောက်သောက်လဲ ကုန်တယ်၊ အာမခံ အဖွဲ့အစည်းက ပေးလျှော်ရတယ်။ ပျောက်လည်း မပျောက်သေးဘူး ဒီလို နဲ့ နောက်နှစ် အာမခံ ပေါ်လစီ သက်တမ်း တိုးဖို့အချိန်ရောက်လာတယ်၊ သူ ဆက်လက် သက်တမ်းတိုးလို့ရနေပါတယ် ဆိုတာမျိုးပါ။ တော်တော်များများ က အဲလို ဆက်လက် သက်တမ်းတိုးဖို ့ရာ အာမခံပါသည် လို့ဆိုတာ တွေ ့နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဖက်ကလည်း သေချာမေးကြည့် ရမှာပါ။
at Tuesday, January 06, 2009 Labels: MM , Technical Posted by nyimuyar4comments
ဝင်းဒိုး ဆဲဗင်း ရဲ့အစမ်း ဘီတာ ဗားရှင်း
ဝင်းဒိုး ဗစ်စတာ ရဲ့နောက်မျိုးဆက် ဖြစ်တဲ့ ဝင်းဒိုး ဆဲဗင်း (windows 7) ကို အစမ်း ဘီတာဗားရှင်း အဖြစ်နဲ့ ဒီဇင်ဘာလ နောက်ဆုံးပတ် ခရစ်စမတ် နဲ့ နှစ်သစ်ကူး ကြားမှာ အင်တာနက် ပေါ်တွင်မှာ စတင်ပျံ ့နှံ့လာပါတယ်။ အင်တာနက် ပေါ်ကနေ ဖိုင်တွေ မျှပြီးတင်ပေးလို ့ရတဲ့ BitTorrent ဆိုဒ် တွေ ပေါ်ကနေ စပြီး ပျံနှံ့ လာတာပါ။ Minonova Link
အားလုံး က ၂၀၀၉ ဇန်နဝါရီလောက်မှာ မှ အစမ်း ဘီတာဗားရှင်း ထွက်မယ် ထင်ထားကြပေမယ့်၊ တကယ်တမ်း ၂၀၀၈ နှစ်ကုန်ခါနီးလေးမှာ ကပ်ပြီး ထွက်လာတော့ တော်တော်ပဲ အံ့အားသင့်ကုန်ကြပါတယ်။
ဒေါသတကြီး ဟစ်အော်တတ်တဲ့ စတိဗ်ဘောမား က ဗစ်စတာ ကို မကြိုက်ကြတဲ့ အဆင့်မမြင့် ချင်ကြသေးဘဲ ဆဲဗင်းကို ပေကပ် စောင့်နေသူတွေကို Windows7will be Vista, butalot better လို ့ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။
ဝင်းဒိုး ဗစ်စတာ ကို ၂၀၀၈ ရဲ့အစုတ်ပြတ်ဆုံး တီထွင်မှု လို့အချို ့သုံးသပ်သူတွေက သတ်မှတ်ပေးကြသလို ၊ အခြား သုံးစွဲသူတော်တော်များများ ကလည်း မနှစ်သက်ကြပါဘူး။ မိုက်ခရိုဆော့ ရဲ့အကောင်းဆုံး တီထွင်မှု အဖြစ် ကျော်ကြားတဲ့ windows XP ကိုပဲ သုံးစွဲနေသူတွေ သုံးစွဲချင်သူတွေက အများကြီး ရှိနေပါသေးတယ်။ အားလုံးက ဝင်းဒိုး ဆဲဗင်း ကို ပို ကောင်းမလားဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့့ စောင့်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့သလို စောင့်မျှော်နေသူတွေ ထဲမှာ ဝါသနာရှင် တဦးဖြစ်တဲ့ စာရေးသူလည်း အပါအဝင်ပါ။ ဟိုးအရင် ၈ နှစ်လောက်က ပီတူး လေးနဲ့ ကွန်ပျူတာ စသုံးတော့ ၂ ပါတ်တခါ စက်ကို ဖောမက်ရိုက် အိုအက်စ်တွေ အသစ်တင်ခဲ့တာ ဆိုတော့ ဝါသနာက မသေးပါဘူး။
သွားလည်နေကျ ဂတ်ဂျက်စ် နဲ့ နည်းပညာ သတင်း အင်တာနက် စာမျက်နှာတွေ မှာပါကတည်း က ဘစ်တောရန့်ဆိုဒ် ပေါ်က ဆွဲချတာ လေးရက်လောက် ကြာမှ ပြီးပါတယ်။ ပြီးပြီးချင်း ညတွင်းချင်း ဖောမက် ရိုက်လိုက်ပါတယ်။ ဆဲဗင်းကို ဖောမက် ရိုက်တာ ဗစ်စတာ ထက်တောင် မြန်သလို ခံစားရပါတယ်။
ဝင်းဒိုး စတက်တက်ချင်း ဖလက်ရှ် စကရင် ပြောင်းသွားတာလည်း ကြိုက်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ပထမဆုံး စပြီး စက်အတက်မှာ နက်ဝေါ့ တွေ(အဓိက တော့ ဝါယာလက်စ် ပေါ့လေ) ကို တမ်းသိပြီး ချိတ်ပေးနိုင်တာ တော်တော် ကောင်းပါတယ်။ ဗစ်စတာ တုန်းက ဝါယာလက် နက်ဝေါ့အချိတ်မှာ ရွာလည် ရွာပတ် ခဲ့တာကို တောင် ပြန်မှတ်မိသွားသေးတယ်။
အင်တာဖေ့စ် ပိုင်းကတော့ နဲနဲပဲ အပြောင်းအလဲ လုပ်တာပါ။ ဒါပေမယ့် မြန်တယ် ပြောရမယ်။ ဗစ်စတာကို ဝိတ်လျှော့ထားပြီး ပိုမြန်အောင် လုပ်သလားကတော့ ဒင်းတို ့မှပဲ သိမှာပါပဲ။ စာရေးသူ ရဲ့နာမကျန်းဖြစ်ထားတဲ့ ပေါင်တင် ကွန်ပျူတာလေး ပေါ်မှာတောင်မှ တော်တော်ကြီးကို ချောချောမွေ ့မွေ ့နဲ့မြန်ဆန်အောင် သုံးလို ့ရတာတွေ ့ရပါတယ်။
တကယ်က ဆဲဗင်းကို အကြာကြီး သုံးမလို ့ပါပဲ။ ၂၀၀၉ နှစ်လယ်လောက် အထိ သုံးလို ့ရမယ် ဆိုထားပေမယ့် စာရေးသူက အက်တီဗေးရှင်း လုပ်လို ့မရတဲ့ အတွက် ရက်သုံးဆယ်ပဲ ခံမှာဖြစ်ပါတယ်။
ထုတ်လုပ်သူတွေကို လိုင်စင် ထပ်တိုး မရောင်းတော့ဘူးလို့သေမိန် ့ချခံထားရတဲ့ ဝင်းဒိုး အိပ်စ်ပီ ကိုတောင်မှ ၂၀၀၉ ခုနှစ် မေလ ၃၀ ရက်နေ့အထိ သက်တမ်း ထပ်တိုးပေးခဲ့ ပုံထောက်ရင် ၂၀၀၉ နှောင်းပိုင်းမှာ ထွက်မယ် လို့ယူဆနေကြတဲ့ ဆဲဗင်း ဟာ ထွက်ဖို့သိပ်မသေချာသေးဘူး လို့ကျွမ်းကျင် သူတွေက သုံးသပ်နေကြပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘီတာ ဗားရှင်း မှာတောင် မှ ဒီလောက် စက်ရဲ့စွမ်းအားတွေ သိပ်မစားဘဲ မြန်ဆန်နေသေးရင် တကယ်တမ်း အားလုံး သုံးဖို့ဖြန့်တဲ့ အခါကျ ဒီထက် ပိုကောင်းပါစေလို့မျှော်လင့်ရင်း အစမ်းသပ်ခံ ဆဲဗင်း ပေါ်ကနေ နှစ်သစ်ကို နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။
at Thursday, January 01, 2009 Labels: MM , Singapore Posted by nyimuyar2comments
စာရေးသူတို့လူမျိုး အများစုက အာမခံ လုပ်ငန်းတွေ နဲ့ သိပ်ရင်းနှီးလေ့ မရှိကြပါဘူး။ ပြည်တွင်းက လူတွေရော ပြည်ပရောက် နေသူတွေပါ အာမခံ လုပ်ငန်းတွေ ပေါ်လစီ တွေ နဲ့ စိမ်းနေကြပါသေးတယ်။ စာရေးသူလည်း တယောက် အပါအဝင်ပေါ့။
စာရေးသူ သွားဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပြည်ပ ခရီးအချို ့၊ ဒါမှမဟုတ် ယာယီ သွားဖူးတဲ့ နိုင်ငံ အချို ့မှာ သက်ဆိုင်ရာ ရုံးခွဲတွေက လူတွေကပဲ အဆင်ပြေသလို စီစဉ်ပေးတော့ အာမခံတွေ အကြောင်း ကောင်းကောင်း မသိခဲ့ပါဘူး။
စင်ကာပူရောက်ပြီး တော်တော်ကြာတဲ့ အထိ ဘာအာမခံပေါ်လစီ မှ မဝယ်ထားပါဘူး။ မြန်မာလူမျိုးပဲ တို ့တွေ တသက်လုံး အာမခံ ထားကြတာမှ မဟုတ်တာ ဆိုပြီး နေလိုက်တာပါပဲ။ ဒီလို နဲ့ အကြောင်း တိုက်ဆိုင် လို့၂၀၀၈ ထဲမှာ ကိုယ်တိုင်လည်း ဆေးရုံ ဆေးခန်း တွေ နဲ့ ပတ်သက်ခဲ့ရပြီး။ အခြား စိတ်မကောင်းဖွယ် သတင်းတွေကို လည်း ကြားရပါတယ်။ (မခိုင်ယဉ်ယဉ်ဌေး ရဲ့သတင်းဟာ စာရေးသူ တို့ကို တော်တော်ပဲ အသိပညာ ပေးသွားပါတယ်။)
အဲ့ဒီ ကျတော့မှ ဆေးကုသစားရိတ် ကြီးတဲ့ စင်ကာပူလို နေရာမျိုးမှာ ကျန်းမာရေး အာမခံ ရှိသင့်တယ် ဆိုတာ သေသေချာချာ သဘောပေါက်လာပါတယ်။ လူတိုင်းလည်း ထားသင့်တယ် လို ့လည်း ထင်ပါတယ်။
ဒါနဲ့ပဲ လက်လှမ်းမှီ သမျှ စင်ကာပူက ကျန်းမာရေး လုပ်ငန်းတွေ ပေါ်လစီတွေ အခြား သိသင့်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို စုံစမ်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ အကြောင်းတွေကို သူငယ်ချင်းတွေ မိတ်ဆွေတွေ နဲ့ ဆွေမျိုး တွေကို ညွှန်းဖြစ်ပြီး ဖတ်စေချင်လို့ရေးလိုက်ပါတယ်။
at Thursday, January 01, 2009 Labels: General , MM Posted by nyimuyar0comments
သာယာလှပသည့် ဒီဇင်ဘာ နှောင်းပိုင်း နှစ်မကူးမီ ၂ ရက်အလိုမှာ ကွန်ပျူတာ ပျက်သွားပြီလား မသိဘူး ဆိုသည့် သတင်းစကားကို သက်ထားက ဖုံးဆက်ပြောပါတယ်။ အလုပ်ထဲရောက် နေတော့ ဘာမှ သေသေချာချာ မမေးလိုက်ဘူး သိပ်ဆိုးလာရင် ပိတ်ထားလိုက် လို ့သာ ပြောဖြစ်တယ်။ ညနေဖက် အိမ်ပြန်ရောက်တော့မှ အသံတွေ တဂီးဂီး တဂစ်ဂစ် မြည်နေလို့ လက်တော့ ကို ပိတ်ထားလိုက်တယ် ဆိုတာ သိရတယ်။
ဗီဇ နဲ့ ဝါသနာ အရ လက်တော့ ကို ဖွင့်ဖြစ်သွားတယ်။ အတူနေ သူငယ်ချင်း တယောက်ကလည်း ကူပါတယ်။ စစခြင်း ဘယ်ကနေ ဘယ်လို ဖွင့်ရမှန်း မသိတာနဲ့ပဲ နာရီဝက်ကျော် ကြာသွားတယ်။ မရရ အောင် ဖွင့်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်အခံ နဲ့ ကြိုးစားလိုက်တာ တနာရီ လောက်လည်း ကြာရော စာရေးသူ ရဲ့လက်တော့ တစစီ ဖြစ်သွားတော့တာပါပဲ။
အလင်းရောင် သိပ်မကောင်းတဲ့ နေရာတွေကို ဓာတ်မီးနဲ့ ကူထိုးပေးတဲ့ သက်ထားက ပြောရှာပါတယ်။ လက်တော့လည်း အေးချမ်းမေ သီချင်းလို ဖြစ်သွားပြီတဲ့။ တစစီကျိုးပဲ့နေတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ တစစီ ပြုတ်သွားပြီ ပြန်တပ်လို့မှ ရပါတော့ မလားတဲ့။
၂၀၀၈ ဒီဇင်ဘာ အမှတ်တရပါပဲ။ စက်ကောင်းဖို့လေးခါတိတိ စက်ကို တစစီ ဖြုတ်လိုက် ပြန်တပ်လိုက် လုပ်ရတယ်။ နှစ်သစ်ကူးကြို တဲ့ဒီဇင်ဘာ ၃၁ (New Year Eve) မနက် ကျမှ အိုကေသွားပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ စက်က အားလုံး ကောင်းသွားပေမယ့် ဝက်အူ တလုံးကတော့ ပိုနေတယ်ဗျ။